အရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီးမော်ကွန်း - ထို rayhab
Homeတူရကီအရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး
Gaziantep ရထားဘူတာများတွင်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကတည်းက 1953 နှစ်များတွင် Gaziantep ၏ခေတ်သစ်သမိုင်းကအရေးအပါဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဘူတာရုံအဆောက်အဦးနှင့်အတူအတော်များများဖြည့်စွတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဤကာလများတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ဖြည့်စွတ်သောအဆောက်အဦများတစ်ခုမှာ [ပို ... ]
Batmanlılarခန့် 15 တထောင်ရထားလမ်း Batman-Diyarbakir, တည်ဆဲနှင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးraybüsမှပြောင်းလိုလားသည့်ရထားလမ်းကွန်ယက်၏တက်ကြွသောပြည်နယ်အားဖြင့်ခရီးထွက်လူတွေကိုမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်း။ Batman အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်Raybüsသတင်းစာများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် Epilogue [ပို ... ]
Karakoyun အဆိုပါမြို့တော်ရယူ Interchange, Acceleration လေ့လာရေးခဲ့သည်
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ၏လုပျငနျးရပ်တန့်များ၏ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုရယူသုံးအတွက်အခက်အခဲတွေ့ကြုံခံစားရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတBeyazgülŞanlıurfaမြူနီစီပယ်အဖွဲ့များ၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူ Karakoyun Interchange စီမံကိန်းကို transferee, ထိုဧရိယာ၌အားထုတ်မှုအရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ Sanliurfa အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်အသွားအလာနှင့်ကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာအထိသက်သာရာမယ်လို့ [ပို ... ]
Batman အဆင့် Crossing rehabbed ခံရဖို့ကိုတွေ့
ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (BTS), Batman မြူနီစီပယ် Co-ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားပေါ်မြို့ဖြတ်သန်း Mehmet Korkmaz သံနှင့် Songul အဆင့်ကူးပြည်နယ်အပေါ်အမြင်များဖလှယ်တွေ့ရှိခဲ့သည်သူ့ရုံးခန်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမတ်စောက်သော intermodal Gaziantep ခဲ့ Make
စောက်အတွက် intermodal ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများ Intermodal သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ, Gaziantep အတွက် Mersin ဥရောပနှင့်မြောက်အာဖရိက၏ intermodal ဆိပ်ကမ်းကိုအတူရွှေ့ဖို့အတွက်ဒေသတွင်းတင်ပို့သူများအနေနဲ့ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်။ အီတလီ, ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံမှရေခြားမြေခြားရုံးများ၏တည်ဆောက်ပုံများ [ပို ... ]
Diyarbakir ရွေးကောက်ပွဲပစ္စည်းစေ Streetcar အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကာလ Want!
Diyarbakir ၏လူများ, တစ်ဦးချင်းစီစာသင်အတွက်ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်လမ်းရထားစီမံကိန်း activation လိုသည်။ ပြည်သူ့ယခုလျင်မြန်စွာတစ်ဦးအဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူသွားလာလိုနိုင်ပါတယ်။ Eken သတင်းအရသိရသည်Güneydoğugüncelထံမှ Seyfettin; ရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်မီ "အများစုကမြူနီစီပယ် [ပို ... ]
မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့နှင့်ခရိုင်အလေ့အကျင့်အတွက်ဆက်လက်လမ်းများနှင့်နညျးလမျးပျေါတှငျဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်မြန်ဆန်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတ Zine El တူနီးရှားတွင်Beyazgülညွှန်ကြားချက်။ နိုင်ငံသားများသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတကသူတို့ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်နှင့်Beyazgülများအတွက်အသင်းအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါတာဝန် Sanliurfa မှမလာပါဘူး [ပို ... ]
အဆိုပါ 100 ကီလိုမီတာခုနှစ်တွင်ကျေးလက်ဒေသကွန်ကရစ်လမ်းမြို့တော်မြူနီစီပယ်, Sanliurfa စေရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပိုမိုပြင်းထန်လာနှင့်အတူနိုင်ငံတော်သမ္မတ Zine El တူနီးရှားတွင်Beyazgül 13 မြို့နှင့်ခရိုင်ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်လမ်းအကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်မြန်နှုန်းဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုပေး၏။ Sanliurfa မြို့လယ် [ပို ... ]
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြောင်းကုန်ပြီတူနီးရှားတွင်Beyazgülလမ်းကိုအပေါ်တစ်ဦးသုတေသနဖန်ဆင်းတော်မူသောKaraköprüဒါကိုတော့နှင့် Zeynel နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အတွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမိုးရေချိန်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဆွေများကဧပြီလတွင်စတင်စတင်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများနှင့်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်၏ 1 ပြီးစီးနှင့် တွဲဖက်. မနက်ဖြန်အလုပ်စပြုမည်ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဆောငျးရာသီ [ပို ... ]
ဗဟိုရာသီဥတုထိန်းချုပ််ထမ်းဆောင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်မြို့ရာသီအလိုက်ပျမ်းမျှအထက်တိုးမြှင့်လေထုအပူချိန်ကြောင့်Diyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ ရာသီဥတုချောချောမွေ့မွေ့ရာသီအလိုက်စံချိန်စံညွှန်း, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိဖို့ကြောင့်နိုင်ငံသားများ၏ပူDiyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, [ပို ... ]
Sanliurfa ကလေးများယာဉ်အသွားအလာသင်တန်း Park ကအဆုံးစစ်မှန်သောလာကြသိရပါတယ်
ဤအချိန်ကလေးယာဉ်အသွားအလာသင်တန်း Park မှာတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးကတ္တရာခင်းအလုပ်အတွက်နိုင်ငံသားများမှပေးအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်တိုတောင်းတဲ့အချိန်အားဖြင့်၎င်း, ပြီးနောက်ဖန်ဆင်းŞanlıurfaတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ Sanliurfa လူငယ်နှင့်အနာဂတ်၏တူရကီရဲ့အငယ်ဆုံးမြို့ [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာခေါ်ဆောင်သွားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်၏ Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဆိုပါဘော်ဒါကြေးဘာ့ဂ်သို့ရောက်ကြ၏။ အသစ်သောအခွန်ဇူလိုင်လ 1 2019 1 ထံမှအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဖွဲ့ပါလိမ့်မည်အင်အားသုံး Zai သို့ကြွတော်မူ ... ကဇူလိုင်လ 2019 ထံမှတရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ [ပို ... ]
တူရကီ-Kars ခရီးသွားဧည့် Orient Express ကို၎င်းတို့၏လေ့လာရေးခရီး TCDD စတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ခုရထားဤအင်္ဂါရပ်ကိုပိုမိုန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။ သတင်းHabertürk Aydilek Olcay, ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဆိုအရကြောင့်ရောက်ရှိမည် TCDD ခရီးသွားရထားဝယ်လိုအားအပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, [ပို ... ]
နေ့တိုင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရထားလမ်း Batman-Diyarbakir အားဖြင့်ခရီးထွက် 15 တထောင်လူများ, ရထားလမ်းကွန်ရက်အတွင်း၌လက်ရှိနှင့် activated, ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးraybüsသို့ကူးပြောင်းခံရဖို့လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့က Batman အတွက်ဦးစားပေးမယ့်, Raybüsသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပေး Audio Diyarbakir အတွက်ခြစ်ရာမှပထမဦးဆုံးလူကူးလမ်းခဲ့
လူကူးဦးစားပေးအသွားအလာနှင့်လုံခြုံမှု, ပုံရိပ်ယောင်များကထောက်ခံတူရကီ, လုပ်နေတာ TITLE လှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင်ရှိရာလူသွားလူအသွားအလာကဒျနှင့်ဘာသာပေါင်းစုံ2အဆိုပါပြင်းထန်သောလမ်းပေါ်နှင့်အတူကားတစ်စီးကြောင်းသေချာစေရန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့Diyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
အသစ်ကလမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏ 90 ကီလိုမီတာမှ Sanliurfa အစပိုင်း၌
"လူထုလူမှုဖူလုံရေးန်ဆောင်မှုများ" အကြား Sanliurfa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Sanliurfa အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဦးခေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်ညှိနှိုင်းရေး (YİKOB) ဖျော်ဖြေခံရဖို့အလုပျ၏အတိုင်းအတာကိုရည်မှတ်နေတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးခန်းမ, Sanliurfa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်Beyazgülတှငျကငျြးပခဲ့ဝန်အခမ်းအနား [ပို ... ]
Şanlıurfaတဲ့ Metropolitan ရိပ်သာလမ်း6တစ်ချိန်တည်းပွုလုပျခွငျး
လျင်မြန်စွာအတူတကွရာသီအလိုက်အခြေအနေများအတွက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူမြို့တော်မြူနီစီပယ်ကတ္တရာအလုပ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်တစ်ချိန်တည်း6မှာမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Boulevard ၏ဆောက်လုပ်ရေးနေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချောမွေ့စွာပို့ဆောင်ရေးများအတွက်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့သစ်တစ်ခုလူနေအိမ်ဧရိယာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူတဦးတည်းလက်ပေါ် [ပို ... ]
Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်Beyazgül, ကလေးများယာဉ်အသွားအလာသင်တန်းပန်းခြံ၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Sanliurfa Boulevard အတွက်အသွားအလာပြဿနာမှသက်သာရာရစေရန်အလို့ငှာ, လမ်းဆုံ, မြေပေါ်နှင့်အောက်ခြေမြို့တော်မြူနီစီပယ်ပိုမိုသိရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းစေ့စပ်တံတား [ပို ... ]